Maxaa ka dhexeeya filimka la sugayo inuu soo baxo iyo Caanaha la xadayo? - BBC News Somali
Maxaa ka dhexeeya filimka la sugayo inuu soo baxo iyo Caanaha la xadayo?
Image caption Taageerayaasha filimada ayaa aaminsan in caanaha ay wax u tarayaan caanimada filimka
Dadka ka ganacsada caanaha ee ku nool gobolka koonfurta Hindiya ku yaalla ee Tamil Nadu ayaa booliska u gudbiyay cabasho ay ka qabaan xatooyo xad dhaaf ah oo loo geysto caanahooda, xilli filim cusub uu ka soo baxayo gobolkaas.
Marka la eego dhinaca diinta, dadka Hinduuga ah waxay caanaha ku daadiyaan waxyaabaha ay caabudaan iyo astaamaha ay barakeystaan, laakiin hadda dad faro badan oo daawadeyaasha filimada ah ayaa dhaqankan hab kale u isticmaala, iyagoo la qabsaday iney caano ku shubaan sawirrada filimaanta ay jeclaan lahaayeen iney heer sare ka gaaraan suuqa.
Hase ahaatee ganacsatada Caanaha ayaa dhankooda sheegaya iney arrintan la yaabka leh u horseedday khasaare baaxad leh.
"Waa dhaqan loogu tala galay waxyaabaha la caabudo - ma aha mid khuseeya xidigaha filimada", ayuu yiri guddoomiyaha ururka ay ku bahoobeen ganacsatada caanaha ee gobolka Tamil Nadu.
Akshay Kumar oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya iyo filmka cusub ee Padman
Salman khan oo maxkamadda u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo
Gabadh qoraa ah oo qiratay in ay u geftay Priyanka Chopra
Dhibaatadan culus ee xaditaanka caanaha ah ayaa sababtay in ururka ganacsatada caanaha ay Arbacadii booliska ka diiwaan galiyaan kiis ay ku doonayaan in lagu mamnuuco dhaqankaas.
Taliska booliska ayaa dhankooda xaqiijiyay iney tallaabo deg deg ah qaadi doonaan.
Wajiga cusub ee ay taageerayaasha xidigaha filimada u yeeleen dhaqankan ayey ku magacaabeen "paalabhishekam", iyagoo caanaha ku shubaya sawirrada xidigahaas ee darbiyada lagu xayeysiiyo.
Waxay rajo fiican ka qabaan in uu filimka aad u weynaanayo haddii ay caano ku shubaan sawirka Jilaaga, ka hor inta uusan soo bixin.
SA Ponnusamy, oo madax ka ah guddiga ganacsatada ayaa BBC-da u sheegay in dhaqankan khasaaraha keenaya uu soo socday 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
"Taageerayaasha filimada ee gobolkan waxay ficilkaas u sameeyaan maadaama ay xidigaha jilayaasha ah u aaminsan yihiin kuwo la qadariyo".
Kartoomada caanaha ayaa aroortii laga soo qaadaa warshadaha, waxaana inta badan la hor dhigaa dukaamada, si ay shacabka u iibsadaan.
Laakiin taageerayaasha filimada ayaa saacado gudahood ku xada caanaha, iyagoo aan wax lacag ahna ka bixinin.
Maalintii Talaadada ahayd jilaaga filimada Tamil-ka ee lagu magacaabo Silambarasan ayaa soo duubay muuqaal uu taageerayaashiisa uga codsanayo iney caano ku daadiyaan sawirradiisa ku saabsan filimkiisa cusub oo dhawaan la filayo inuu soo baxo.
Sawirrada lagu xayeysiinayo filimkaas ayaa ku dhagan inta badan darbiyada magaalada caasimadda u ah gobolka ee Chennai.
Muuqaalkaas ayaa aad u faafay waxaana uu sababay in ururka ganacsatada caanaha ay tallaabo qaadaan.